६ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ६९ वर्षीय वृद्व पक्राउ, काउकुती लगाउँछु भन्दै… – Jaljala Online
६ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ६९ वर्षीय वृद्व पक्राउ, काउकुती लगाउँछु भन्दै…
Posted on June 4, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
जेठ २१, काठमाडौं । प्रहरीले रामेछाप घर भएकी ६ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने एक वृद्वलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–९ लुबु लामाटार घर भएका ६९ वर्षीय शिव प्रसाद घिमिरे रहेका छन् ।
घिमिरेले गत जेठ १५ गते स्कुलबाट घर फर्किरहेकी बालिका (नाम परिवर्तन) सोनियालाई ललाईफकाई घर लगेर बलात्कार गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त, सातदोबाटोका प्रमुख डीएसपी गौतम मिश्रले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
डीएसपी मिश्रले भने, ‘सोनियालाई घिमिरेले एक्लै फर्किरहेको देखेपछि बोलाएर घरमा लगेर दही, रोटी र तरकारी खुवाएछन । त्यसपछि काउकुती लगाउँछु भन्दै काखमा राखेर बलात्कार गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ ।’
घिमिरेले सोनियालाई पछि यो कुरा कसैलाई नभन भन्दै १० रपैयाँ दिएको समेत प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको डीएसपी मिश्रले बताए । घरमा कसैलाई नभनेकी सोनियाले स्कुलको साथीलाई भनेपछि घटना बाहिर आएको बताइएको छ ।
घटनाबारे बालिकाकी आमाले थाहा पाएपछि जेठ १७ गते प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा घिमिरेमाथि उजुरी दिएकी थिइन् । बालिकाको आमाको जोहरीपछि प्रहरीले जेठ १९ गते घिमिरेलाई घरबाटै पक्राउ गरेको डीएसपी मिश्रको भनाई छ ।
पक्राउ परेका घिमिरेमाथि अदालतबाट ६ दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घिमिरेले यसअघि पनि बालिकाहरुलाई प्रलोभनमा पारेर बलात्कार गर्दै आएपनि स्थानीयले सानातिना घटना भन्दै गाउँमै मिलाउँदै आएको एक स्थानीय बताउँछन् ।
यता बालिकाको थापाथलीस्थित प्रसुती गृहमा सामान्य उपचारपछि घर फिर्ता गरिएको छ । -रातोपाटीबाट साभार
मन्त्री विष्टले कर्मचारीलाई दिए एस्तो निर्देशन
Posted on May 16, 2019 Author Jaljala Online
जेठ २, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सुदृढ बनाउने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री विष्टले पेशागत मर्यादाको ख्याल राखेर आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाउन पनि कर्मचारीहरुलाई सचेत गराए । सार्वजनिक संस्था कर्मचारी संगठन नेपालको ३० औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित […]
काठमाडौंका घरधनीलाई दशैंमा नयाँ नियम, के के गर्नुपर्छ ? थाहा पाउनुहोस्
Posted on September 22, 2019 September 22, 2019 Author Jaljala Online
असोज ५, काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकामा घर भएर दशैंका बेला पुर्ख्यौली घर जाने व्यक्तिले घर छाडेर जानेबेला प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले दशैं, तिहार तथा छठ पर्वका लागि तयार पारेको सुरक्षा योजनामा दशैंका बेला काठमाडौं बाहिर जाने घरधनीहरुले अनिवार्य रुपमा नजिकको प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दशैं, […]
यसरी बढाउनुहोस्, स्मरणशक्ति
Posted on May 21, 2019 May 21, 2019 Author Jaljala Online
अर्पण शर्मा/ जेठ ७, काठमाडौं । बदलिँदो जीवनशैली, तनाव, अस्वस्थ खानपान र अपूरो निद्राजस्ता विभिन्न कारणले मानिसको स्मरण शक्ति कमजार हुँदै गइरहेको छ । उमेर ढल्किदै जाँदा स्मरणशक्तिमा कमी आउनु स्वाभाविक हो । तर, पछिल्लो समय कम उमेरमा स्मरणशक्तिमा समस्या देखिन थालेको छ । स्मरणशक्ति बढाउनका लागि विभिन्न विधि अपनाउन सकिन्छ । खानपान हामीले दैनिक […]
प्रदेश ५ मा भयो यस्तो अचम्मको घटना
आरुबोटे नरसंहार: हत्याअघि मानबहादुरको त्यो कल– एउटैले २० जना मार्न सक्छ! (नालीबेली)